PSG oo qeyb ka soo noqotay loolanka loogu jiro saxiixa mid ka mid ah xidigaha kooxda Manchester United – Gool FM
PSG oo qeyb ka soo noqotay loolanka loogu jiro saxiixa mid ka mid ah xidigaha kooxda Manchester United
(PSG) 17 Nof 2018. Kooxda Paris Saint-Germain ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro Eric Bailly, kaasoo xili ciyaareedkan fursad ka waayay qorshaha tababare Jose Mourinho, kadib markii uu ka door biday xidigaha Chris Smalling iyo Victor Lindelöf.
Eric Bailly waa difaaca ugu fiican kooxda Manchester United ee xilligan, balse khilaafka kala dhexeeya tababare Jose Mourinho ayaa laga yaabaa inay ku qasabto inuu ka dhaqaaqo garoonka Old Trafford.
Bailly ayaa la filayaa inuu banaanka ka noqon doono garoonka Old Trafford suuqa furmi doono bisha Janaayo, iyadoo ay xiiseenayaan kooxo fara badan ee qaarada yurub.
Kooxda ugu dambeesay ee qeyb ka soo noqotay loolankan ayaa ah Paris Saint-Germain oo diyaar la ah in saxiixiisa ay ku bixiso lacago qaali ah.
Kooxaha kale ee xiiseenaya adeega difaaca kooxda Manchester United ayaa waxaa ka mid ah kuwa reer London ee Tottenham iyo Arsenal, balse United ayaa dalabkeedu yahay 40 milyan ginni hadiiba ay ka fasaxeyso laacibkeedan garoonka Old Trafford.
Kadib weerarkii ay ku qaadeen Lovren iyo van Dijk, halyayga Real Madrid Jorge Valdano oo si weyn u difaacay Sergio Ramos